Mogadishu Journal » 2017 » February » 13
Puntland oo xukun dil ah ku riday dhalinyaro ku eedeysan in ay dilal geysteen
Mjournal :- Maxkamada Ciidamada qalabka sida ee Puntland ayaa maanta xukun dil toogasho ah ku riday 7 nin oo lagu cadeeyay inay ahaayeen kuwii ka dambeeyay Dilalkii bil ka Hor Boosaaso loogu Gaystay Masuuliyiin Dowladda Puntland ka Tirsanaa oo ka koobnaa saddex sargaal....
Madaxweynaha oo ka tacsiyadeeyay geeridii xildhibaan Saciid
Mjournal :-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyadeeyay geerida xalay ku timid Jenaraal Siciid Xasan Geeddi oo ahaa xubin ka tiran Barlamaanka cusub, maalmahan dambena ku xanuunsanaa magaalada Muqdisho. War qoraal ah oo ka soo baxay Madaxweynaha ayaa...
Madaxweyne Siilaanyo oo ka hadlay wax ay ku badalanayaan saldhiga militari ee imaaraadka
Mjournal :-Madaxweynaha Soomaaliland,Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa ka hadlay heshiiska uu maamulkiisa la-galay dowladda Imaaradka Carab,kaaso dhigaya inay saldhig milateriga ka dhisan karaan magaalada Berbera. Wuxuu sheegay dhismaha saldhigan inay ku badalan doonan mashaaric waa...
Axmed Madoobe oo ku baaqay in la taageero madaxweyaha cusub
Mjournal :-Madaxweynaha maamulka Jubbaland,Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa soo jeediyay in la taageerro madaxweynaha cusub ee dowladda Faderaalka. Wuxuu sheegay inay howlo badan horyaallan madaxweyne Farmaajo,kuwaaso u baahan in gacan laga siiyo,inta wuxuu ku darey si...
Mjournal :- Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya C/salaan Hadliye Cumar ayaa deg deg u soo galay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, maalmo kaddib markii la doortay Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo. Mr Hadliye ayaa 9-kii bilood ee u dambeysay ku...
Mjournal :- Safiirka cusub ee dowladda UK u magacawday Soomaaliya ee aan wali waraaqadaha aqoonsiga laga guddoomin ayaa bilaabay in sifo aan sharci aheyn in uu ku howl galo. David William Concar ayaa magacaabistiisa timid maalmihii ugu dambeeyay ee xukunka Madaxweynihii hore...
Maanta kulan aad u balaaran oo ay Beesha Murusade ku yeelatay magaalada Muqdisho, kulankaas oo ay kasoo qeyb galeen dhammaan siyaasiyiinta, saraakiisha , aqoonyahanada , ganacsatada, dhalinyarada iyo culimaa udiinka beesha Murusade ay u soo sharaxdeen aqoonyahano uu ka mid yahay...